TOP 100 Qormooyin Maalintii ah Sanadka 2020 - xigasho Pedia
105 xigasho iyo odhaah
Kulligeen waxaan sugeynaa inaan bilowno maalintayaga maalin uun ama si kale. Dhammaanteen waxaan u baahan nahay riixitaan yar si aan ugu laabano nolosheena nolol maalmeedka ka dib markaan kacno subaxdii.
Qaar badan oo inaga mid ah waxaa laga yaabaa inay dareemaan inay ku murugooto tirada shaqada nagu soo socota. Xaaladaha noocaas ah, tiro yar xigashooyinka maalinta caawin kara.
Xigashooyinkani waxay noqon karaan aruur kahadlaya cabbirro kaladuwan oo nolosha waxaana laga yaabaa inay kugu dhiirigeliyaan qaab aadan maleyn.
Qayb aad u wanaagsan oo ku saabsan xigashooyinku waa inay iyagu is-sharraxayaan oo si fudud waad u fahmi kartaa. Laakiin waxaad u baahan tahay waqti in aad ka fikirto si aad runti ugu ekaato macnaha saxda ah si aad ugu dhaqanto sida waafaqsan.
Haddii aad runtii si fiican u fahanto markaa waad xasuusan doontaa waqti in yar oo aad awood u yeelan doontaa inaad ku dabaqdo nolosha dhabta ah si dardar leh.
Haddii aad u maleynaysid inaad iloobi karto wax aad aqrisay oo aad runtii jeceshahay, markaa had iyo goor way fiican tahay inaad ku qorto meel uun oo aad uruuriso.
Waqti ka dib waad fahmi doontaa in aruurintaasi ay kuu noqotay mid kuu keydinaysa. Xigashooyinka maalinta wuxuu ku siin karaa aragti ka duwan oo laga yaabaa inuu jabiyo habkaaga caadiga ah ee fikirka.
Waxa laga yaabo inaadan ogaan karin waa in xigashooyinkani yihiin wax aad ku tiirsanaan kartid oo had iyo jeer way jiri doonaan. Khasab kuguma aha inaad ku tiirsanaato qof kale ama waqtigooda.
Dhibaatooyinkaaga waad u xallin kartaa oo keliya adoo ka fikiraya naftaada iyo akhrinta xigashooyinkaas.
Waxay kaa dhigaysaa kalsooni badan waxayna ku siineysaa xamaasad aad ku kasbato wax badan markii aad ogtahay inaadan ku tiirsaneyn qof kale gabi ahaanba xalinta dhibaatooyinkaaga.
Bini’aadamka wuxuu ubaahan yahay dhibaatooyin nololeed waayo waa lagama maarmaan in lagu raaxeysto guusha. - APJ Abdul Kalam
Annaga, bini-aadamka waxaan leenahay u janjeera in lagu qabto farxadda. Haddii farxaddu sii dheeraato,…
Noloshu waxay bilaabataa dhamaadka aaga raaxadaada. - Neale Donald Walsch
Kulligeen waxaan ku leennahay riyooyin iyo yoolal nololeed. Laakiin badiyaa waxay ku xidhan tahay waxa aan aragno…
Maskax wanaagsan oo ku saabsan wax kasta waxay ku siin doontaa nolol farxad leh. - Qarsoodi
Rajada ayaa naga sii wadaysa. Waxay ina siisaa tamar si aan u sugno xitaa waqtiga dhibaatooyinka. Gudaha…
Dhoola caddee oo maalin un nolosha ayaa ka daali doonta xanaaqa. - Qarsoodi
Sida aan nolosha ula soconno, waa lama huraan in aan la kulmi doonno wanaag iyo sidoo kale waqtiyo xun ...
Hal fikir oo togan oo subaxda ah ayaa beddeli kara maalintaada oo dhan. - Dalai Lama
Dhiirrigelintu waxay ka imaan kartaa meel kasta! Waxay noqon kartaa aragti fudud, shaqsi ama xitaa dhowr erey…
Waxaa suuragal ah inaan la kulano guul-darrooyin badan laakiin waa inaannaan laga adkaan. - Maya Angelou
Waxaa laga yaabaa inaad ku guul darreysatay mar uun ama noloshaada noloshaada. Waxaa suuro gal ah inaad jabtay oo burbursaday…
Dhibaatooyinka maahan calaamadaha istaaga, waa tilmaamo. - Robert H. Schuller
Markay noloshu ku siinayso liin, naftaada ka dhig liin macaan. Had iyo jeer u daawee wixii dhibaato ah ee kugu soo dhaca sida…
Waqtigaagu wuu xadidan yahay, markaa ha ku lumin inaad ku noolaato nolosha qof kale. - Steve Jobs
Waqtigaagu wuu xadidan yahay, markaa ha ku lumin inaad ku noolaato nolosha qof kale. Ha ku qabsan afkaaga - -
Hadaadan naftaada jeclayn, waxaad had iyo jeer baacaysaa dadka aan adiga ku jeclayn. - Mandy Hale
Waa inaad ogaataa in farxaddu tahay waxa ugu muhiimsan noloshaada. Hadaadan faraxsanayn…
Noloshu maahan inaad naftaada hesho. Noloshu waa sameynta naftaada. - George Bernard Shaw
Dad ahaan ahaan, waxaa nalagu duceeyey hibo kala duwan. Kulligeen waxaan haysannaa wax gaar ah oo ku saabsan nafteenna…
Noloshu waa qaali. Dadka nolosheena ku jira waa kuwo gaar ah laakiin marka lagu gudajiro horumarinta cilaaqaad,…
Hadaad rabto inaad ka adkaato cabsida, guriga ha fadhiyin oo ka fikir. Bax oo mashquul. - Dale Carnegie
Si kasta oo uu qofku u dhiirran yahay, dhammaantood waxaynu haysannaa cabsi u gaar ah. Waxay ka imaan kartaa…
Kama dabbaalan kartid cirifyada cusub ilaa aad ka hesho geesinimada inaad lumiso aragga xeebta. - William Faulkner
Kulligeen waxaan door bidnaa inaan joogno aaga raaxada. Si kastaba ha noqotee, haddii aan ka soo bixin raaxadeena…
Akhlaaqda weyn waxay noqoneysaa maalin weyn oo noqota bil weyn oo noqota sanad weyn oo noqota nolol weyn. - Mandy Hale
Korsashada dabeecad wanaagsan waxay qaadataa waqti iyo dadaal. Xaaladaha kaladuwan ee noloshu waxay noo qaabeeyaan si kala duwan oo nooga dhigaya mid gaar ah…
Uma baahnid inaad aragto jaranjarada oo dhan, qaado tillaabada koowaad. - Martin Luther King, Jr.
Kulligeen waxaan dareemeynaa walwal xagga mustaqbalka maxaa yeelay garan mayno sida ay wax u socdaan…
Noqo isbedelka aad jeceshahay inaad adduunka ku aragto. - Mahatma Gandhi
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa kala duwanaanshaha ayaa ah waxa keliya ee joogtada ah. Waan wadaynaa…
Noqo mid macquul ah, filasho mucjiso. - Osho
Inta lagu guda jiro nolosheenna, waxaan wajahaynaa xaalado kala duwan. Qaarkood waa wax caadi ah oo la filayo halka ay jiraan kuwa kale oo qaadanaya…
Waad helaysaa waxaad siiso - Jennifer Lopez
Nolosheena waxay raacdaa fikradda isdhaafsiga ee u dhigma. Sababtaas awgeed, wax alla wixii aad sameyn doontid, way heli doontaa…
Waxaad leedahay laba dhegood iyo hal af. Raac saamigaas Dhegeyso inbadan, hadal yar. - Lama yaqaan
Inta badan khilaafaadka adduunka waxaa sabab u ah isfaham la'aan. Waxaan inta badan ku mashquulsan nahay sida aan rabno…
Waxyaabaha quruxda badan waxay dhacaan marka aad naftaada ka fogaanayso dayacaadda. - Qarsoodi
Rajada iyo rajo wanaaggu way ina sii wadaan, waxay ina siiyaan xoog iyo geesinimo aan la kulano dhibaatooyinka kaliya sababtoo ah…
Hal cutub oo xun micnaheedu maahan in sheekadaadu dhammaatay. - Qarsoodi
Waa inaan xasuusnaano in noloshu tahay fuulista wadada wareega, iyo kor iyo hoosba marwalba way jiri doonaan.…
Kama gudbi kartid badda adoo istaagaya ama iska fiirinaya biyaha. - Rabindranath Tagore
"Kama gudbi kartid badda kaliya adoo istaagaya ama iska fiirinaya biyaha" - Qeexiddan waxaa loola jeedaa…
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa noloshaadu dhalaali doontaa indhahaaga hortooda. Hubso inay mudan tahay daawashada. - Gerard Way
Maalin maalmaha ka mid ah noloshaadu way ifaafi doontaa indhahaaga hortooda taasoo micnaheedu yahay in nolosheenu aad u badan tahay…
Kala-goys tagid waligaa meel ku gaadhi maysid. Si kaste oo dhan u dhaqaaq ama ha tagin haba yaraatee. - Qarsoodi
Haddii aad ku talajirto ujeedadaada, waa inaad ku dhaqaaqdaa si niyad ah. Hadaadan ahayn…
Ha u oggolaan in maskaxda yar yar ay kugu qanciyaan in riyadaadu aad u weyn tahay. - Qarsoodi
Markasta oo aad iskudayeyso inaad wax uun gaadho, waxaad arki doontaa inay jiraan dad badan oo…
FEAR: wuxuu leeyahay labo macne: 'Wax kasta illow oo Orod' ama 'Weji Waxkasta oo Kac.' Xulashada adigaa iska leh. - Zig Ziglar
Markaad tiraahdid waxaad ka cabsaneysaa wax, waxay ku saabsan tahay doorashadaada. Waxay noqon kartaa sida…
Sare u qaad ereyadaaga, codkiinna ha noqon. Waa roob da’a ubaxyo, ee ma ahan onkod. - Rumi
Had iyo jeer waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu hagaajin karo ereyadaada halkii cod lagaaga qaadi lahaa waxkasta. Adiga…